Nhau - Kucheka kupisa kwekushisa panguva yekugadzira bhegi
Kucheka kupisa kwekushisa panguva yekugadzira bhegi
Mukuita kwekugadzira bhegi, dzimwe nguva bhegi yekuisa chisimbiso haina kunyanya kunaka. Zvigadzirwa zvinogadzirwa nenzira iyi hazvina kukodzera. Chii chinokonzera chiitiko ichi? Tinofanira kuteerera kupisa tembiricha tembiricha
Iko kuendesa kudzora iyo tembiricha tembiricha panguva yekugadzira bhegi, kana iyo tembiricha isina kukodzera, bhegi rakapedzwa rinenge risingakwanise
Kutanga, ita chokwadi chekuti ndezvipi zvinyorwa zvatiri kushandisa. Chinhu chimwe chete chakasiyana hukobvu hwakasiyana hupamhi hwakasiyana urefu, zvinoda tembiricha yakasiyana. Edzai mabhegi akati wandei pakutanga kwemuchina unomhanya kuti uwane tembiricha yakakodzera
Chechipiri, zvinhu zvakasiyana zvinoda tembiricha yakasiyana.
Iyo yekucheka tembiricha inosarudza iyo bhegi mhando, kana tembiricha yakanyanya kukwirira, zvinhu zvinonyungudika, kumucheto kwete zvakapfava uye zvinhu zvichave zvinonamira, ipapo chichava dongo bhegi, kana tembiricha yakanyanya kuderera, haigone kutema bhegi zvachose, uye ichabata hutachiona bhegi rinotevera.
Zvakare, kana muchina wekumhanyisa uchienda nekukurumidza, tembiricha inodawo kukwira kumusoro, kana kumhanya kuchidzika, tembiricha inodawo kudzika nenzira
Isu tinoda kuchenesa iyo yekucheka kupisa kazhinji mushure mekubviswa kwemuchina, mushure mekumhanya kwenguva yakati, ichave iine guruva pane iro rinocheka, kana tikasarichenesa, guruva rinogona kuendesa kubhegi.
Zvakare, isu tinoda cheki chinocheka chinzvimbo, mushure mekupisa kwekucheka uchimhanya kwenguva yakati, isu tinofanirwa kuchitsiva nechimwe chitsva, mushure mekucheka tichishandisa kwenguva yakati, hazvizopinde zvakanyanya.
Saka kana isu tichigona kudzora kudziya kwekucheka tembiricha nemazvo panguva yekugadzira bhegi, inogona kuwedzera kugona kwekugadzira, kudzikisa bhegi tsvina, saka tinogona kudzikisa mutengo.